सम्बन्ध र संवेदनाका आख्यान - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चैत्र ८, २०७६ जीवन क्षत्री
यो वर्ष रोअल्ड डाह्लका कथाहरू पढेपछि यतिका वर्षसम्म साहित्यको कथा विधालाई बेवास्ता गरेकोमा मलाई थकथकी लाग्यो । ‘पिग’ र ‘द भिजिटर’ जस्ता कथा पढेपछि लाग्यो– मानिसको संवेदनालाई यसरी हल्लाउने गरी कथा लेख्न सकिँदोरहेछ र कथाको अन्त्यलाई त्यति झंकारपूर्ण र स्मरणीय बनाउन सकिने रहेछ ।
यसरी कथा विधाप्रति गहिरो मोह जागेका बेला म दुर्गा कार्कीको कथा संग्रह ‘कुमारी प्रश्नहरू’ पढ्न बसें । पुस्तकबाट मेरो एउटै अपेक्षा थियो : फरक स्वादका पठनीय कथा ।दुई दिनमा किताब पढिसिध्याएसँगै लाग्यो— संग्रहका हरेक कथा मानव संवेदनाका अन्तरकुन्तर छिरेर लेखिएका छन् । कथाहरूमा उपस्थित मुख्य पात्रहरू मनका पत्रपत्र खोलेर पाठकसामु हाजिर छन् ।
अनि ती संवेदनालाई उजागर गर्ने बलियो माध्यम बनाइएको छ– मानिसबीचका सम्बन्धलाई । सम्बन्धको उतारचढावसँगै तिनको मनोभावका अनेक रङ पनि आउँछन्, फिका हुन्छन् र हराउँछन् । प्रथम पुरुषमा भनिएका कथामा एकाधबाहेक कथा भन्ने पात्र महिला छन् । अक्सर सबैभन्दा बलियो उपस्थिति पनि तिनैको छ । तिनको माध्यमले केही कथाले यस्ता विषयवस्तुलाई उठाएका छन्, जसलाई न्याय गर्नु असाध्यै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
त्यसमा पनि अनावश्यक रूपमा लेखकको विश्वास नथोपरी पात्रलाई सन्तुलित र अर्थपूर्ण कथा भन्न दिनु झनै ठूलो चुनौती हो । जस्तो कि, स्कुल पढ्दा शिक्षकसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न पुगेकी किशोरीले वर्षौंपछि आफ्नो कथा कसरी भन्छे ? त्यो कथा उसबाट कुमारीत्व अपेक्षा गरेको उसको भावी पतिको भावना र संवेदनासित कसरी जोडिन्छ ? असमयमा र गलत संगतमा तोडिएको कुमारीत्वबारे अनेक कथा लेखिन्छन् तर कुमारीत्वको रक्षा गर्दा सम्बन्ध टुटेको तोडमा परेकी केटीका कथा कति लेखिएका होलान् ?
त्यस्तै, आत्महत्याको संघारमा पुगेर धेरै मानिस फर्कन्छन् तर त्यस्ता कतिको भावनालाई तिनले आफैं लेखेझैं साहित्यमा उतार गर्न सकिन्छ ? महिलामाथिको यौनहिंसा केन्द्रित ‘मी–टु’ आन्दोलनमाथि अनेक कथा लेखिएका होलान् तर त्यसले सिर्जना गरेको माहोलमा गलत चित्रण हुने मानवीय भंगिमाका कथाहरू लेख्नु के सजिलो काम हो ? अनपेक्षित रूपमा आइलाग्ने मृत्युबारे पनि धेरै लेखिन्छ तर आवेशप्रेरित हत्याको लहरो समातेर उत्पीडन र हिंसाको जीवनकाल उतार्नु ?
लेखकले खासगरी प्रेम र यौनको विषय धेरै कथामा जसरी विस्तार र सन्तुलनसहित उठाएकी छन्, सायद नेपाली आख्यान लेखनमा त्यो उहिल्यैदेखि भइआउनुपर्ने कुरा थियो । संगीत र सिनेमामाझैं अहिले पनि सायद नेपाली आख्यान लेखनमा सबैभन्दा लोकप्रिय विषय रोमान्टिक प्रेम अनि प्रेमी–प्रेमिकाको सम्बन्ध होला । तर, प्रेम र सम्बन्धका अन्य आयामले अझै आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।
कार्कीका कथामध्ये ‘चाउमिन’ बाउ–छोरी सम्बन्धको वरिपरि घुमेको छ भने अरू धेरै कथामा परिवारका सदस्यबीचका असामान्य अवस्थाका सम्बन्धसमेत चित्रित छन् । भर्खरकी युवतीको छिप्पिएको श्रीमान्सितको सम्बन्ध (पोइल) देखि कोमामा रहेको श्रीमान्सित जवान श्रीमतीको सम्बन्ध (मनमाया) ले बदलिँदो समाजमा बदलिँदै गरेका सम्बन्धहरूको झलक दिन्छन् । ती यस्ता सम्बन्ध हुन, जुन समाजमा कम संख्यामा भेटिन्छन् तर मानिसको मनोसामाजिक चरित्रबारे धेरै बोल्छन् ।
यी कथाको अर्को विशेषता के भने कथाअनुसार विषय, पात्र र परिवेश फरक भए पनि पुस्तकको पहिलो पृष्ठदेखि अन्तिमसम्म अविच्छिन्न रहने एउटा धागो छ ः ‘मेलानकोली’ को । त्यसको भौतिक रूप छ पात्रलाई लुछुप्प भिजाउने आँसु । पढ्दै जाँदा त्यो मेलानकोली पात्रहरूको मात्रै होइन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ बेलाबेला । खासगरी अभावग्रस्त ग्रामीण जीवनका सधैंभरि दबाइएका महिला पात्रमा त्यस्तो भावना अस्वाभाविक पनि लाग्दैन । तर, त्यसको अर्थ कथाहरू निराशा र दुःखका एकनासे शृंखला हुन् भन्ने होइन । अक्सर उत्पन्न हुने विद्रोहभाव, कहिलेकाहीं व्यवहारमा प्रकट हुने विद्रोह, त्यसले व्यक्ति र परिवारको जीवनमा ल्याउने उथलपुथल अनि दशकौंपछि फर्केर हेर्दा देखिने त्यसको प्रभाव पनि कथामा प्रशस्त छन् । खुसी र सन्तुष्टिका मानवीय भावना पनि आवधिक रूपमा कथामा देखापर्छन्, वास्तविक जीवनमा झैं ।
सबैजसो कथाको अर्को साझा विशेषता– ग्रामीण जनजीवनको मिहिन चित्रण हो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका शब्दमा नेपालमा सहर गाउँ भित्रिँदै र गाउँ, सहर पस्दै गरेकाले अब गरिने गाउँका चित्रणले त्यस खाले परिवर्तनलाई पनि प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । धेरैजसो कथाले गायब हुँदै गरेको गाउँको पुरानो रूपलाई मिहिन रूपमा चित्रित गरे पनि लगभग सबै गाउँको चित्रणमा सहर वा मोबाइल फोनलगायत सहरी मानिने गरेका सुविधा जोडिएर आउँछन्, जुन
स्वाभाविक लाग्छ ।
पुस्तक सिध्याइसकेपछि लाग्यो, लेखनको भावनात्मक पक्षले हरेक कथा र तिनका पात्रहरूलाई जीवित बनाउँछ, एकअर्कासँग जोड्छ र पुस्तक पढिसक्दा नेपाली समाजको एउटै बृहत् कथाका अनेक उपकथाहरू पढेको भान गराउँछ । त्यही भावका कारण हरेक कथामा आउने नयाँ पात्र कतै चिने चिनेजस्तो लाग्छ । नयाँ कथा पढ्दै जाँदा लाग्छ, मानिसको जुन जेलिएको भौतिक र मानसिक अस्तित्वबारे अघिल्लो कथा बोलेको थियो, यो कथाले पनि त्यही कथा बोल्नेछ । तर, यस्तो फरक कोणबाट बोल्नेछ कि यहाँ दुरूह यथार्थको बिलकुलै नयाँ पाटोमा प्रकाश पर्नेछ ।
सबैजसो कथामा समाजको पितृसत्ता बलियो पृष्ठभूमि बनेर बसेको छ । तर, सतहमा चाहिँ केही पात्र र घटनासित जोडिएर मात्रै त्यो प्रकट हुन्छ । पितृसत्ताविरुद्ध आवाज उठाउने पात्रहरूले बलियोसँग त्यसो गर्छन् तर समाजमा झैं त्यहाँ पनि त्यसको (अक्सर अप्रिय) परिणामबाट बच्न सक्दैनन् । तर, पुस्तकको अन्तिम कथा ‘संघार’ चाहिं मूल पात्र अनुराधाको विद्रोहसँगै टुंगिन्छ । सम्भवतः लेखकले अन्तिममा राखेको त्यो कथाले थप सांकेतिक अर्थ पनि राख्छ : हाम्रो समाज पनि अहिले संघारमा छ । यहाँ समाजलाई संघारको यतापट्टि नै राख्न चाहने र उतापट्टि धकेल्न चाहनेहरूबीच द्वन्द्व छ । तिनमा बेचैनी र अधीरता छ । तर, कति मानिस संक्रमणको यही अवधिलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेर सन्तोषमय जीवन पनि बाँचिरहेका छन् । मधुरो रूपमा भए पनि त्यो कथामा लेखकको वैचारिक पक्षधरता प्रकट हुन्छ ।
चेखव, टल्सटाय वा टैगोरजस्ता कथा लेखनका हस्तीहरू अब हामीसँग छैनन् तर उनीहरूको बहिर्गमनपछि पनि विश्व साहित्यले अरू धेरै कुशाग्र कथाकार पाएको छ । तिनले कथा लेखनमा अनगिन्ती नयाँ प्रयोग गरेका छन् । समयसँगै कथा विधा झनै समृद्ध हुँदै पनि छ । त्यससँगै कथाजस्तो केही लेख्ने र त्यसको पहिलो ‘ड्राफ्ट’ सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गरेर वाहवाही बटुलिहाल्ने मानिसहरूको भीड पनि छ । तर, निरन्तर साधना गरेर यो विधालाई नै फराकिलो पार्नेहरू नयाँ प्रविधिलाई सदुपयोग गर्न उत्तिकै माहिर छन् । भारतकी मेहक मिर्जा प्रभुले लोकप्रिय बनाएको मौखिक कथावाचन त्यस्तै एउटा प्रयोग हो ।
आख्यान लेखन यसरी गतिशील रहेको विश्व परिदृश्यमा हामी कहाँ छौं ? जहाँ छौं, त्यहाँबाट अघि बढ्न नेपालमा पढ्ने र लेख्ने दुवै जनसंख्याको गति तीव्र रूपले बढ्नु आवश्यक छ । दुर्गा कार्कीजस्ता नयाँ लेखकहरूले फरक स्वाद र सबलताका कथाहरू लिएर आउनु त्यसैले पनि खुसीको कुरा हो ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १४:१५